I-PORCELAIN WOOD TILE PROS AND CONS - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi I-Porcelain Wood Tile Pros and Cons
Wamkelekile kwi-porcelain yethu yokhuni kunye neengozi kunye nesikhokelo sokuyila kubandakanya iimpendulo kwimibuzo edumileyo malunga nesitayile somgangatho. Ngenxa yenkqubela phambili kwezobuchwephesha namhlanje akusekho nzima ukuba nezinto zokwakha ezibonelela ngokuhlala ixesha elide. Nangona kukho olu phuculo, izinto zendalo zisathandwa kakhulu ngenxa yobuhle bazo obungenakuthelekiswa nanto.
Kuthekani ukuba unokuba nembonakalo entle ye-organic ngelixa unandipha into yokusebenza okuphezulu? Iithayile zeenkuni zeporcelain zibonelela ngezi mpawu ngaphandle kokuchaneka kweenkuni zendalo.
Unxibe u-burgundy ongumtshakazi phantsi kwe-100
Ukumelana namanzi, ukungcola, ukubola, ukulungiswa komlilo, kunye nokuxhathisa kwe-UV, iithayile zeenkuni ze-porcelain ziyindlela efanelekileyo yokuhlawula umthi wakho onzima. Ngokubonakala kweenkuni okwenyani, olu hlobo lophahla lwetayile lunokusetyenziswa ekhitshini, kumagumbi okuhlala nakwizindlu zangasese ezineziphumo ezihle.
Yintoni iTile yePorcelain?
I-Porcelain Wood Tile Pros
I-Porcelain yeThayile yeTayile
Ihlala ixesha elingakanani iTile yePorcelain ejongeka ngathi ngumthi?
Ngaba i-Porcelain Wood Tile Scratch?
Ngaba i-Porcelain Tile iqhekeka ngokulula?
Yeyiphi i-Ceramic efanelekileyo okanye i-Porcelain Wood Look Tile?
Njengalo naluphi na uhlobo lweethayile ye-porcelain, iithayile zenziwe ngomdongwe ocoliweyo okanye i-feldspar eyomileyo kwaye icinezelwe kumilo phantsi koxinzelelo oluphezulu kakhulu kwaye ibhakwe ukuya kuthi ga kwi-2500 Fahrenheit.
Inkqubo ishiya i-tile encinci kwaye isuse umswakama kunye namanzi kwizinto eziphathekayo. Kuba incinci i-porosity ayinakuthintelwa kumonakalo wamanzi kunye nokufuma.
Iithayile zomthi weporcelain zineempawu eziqhelekileyo zephercelain kodwa zilingise inkangeleko yobuhle bendalo beethayile zomthi.
Iithayile zeporcelain ezibonakala ngathi zingumthi zihle kwaye zomelele kwaye ziyaziwa kwiindawo zokuhlala kunye nezentengiso. Inqaku lokuqina le-porcelain kunye nokukhetha okubanzi kuyenza ukuba ibe lukhetho olunobuchule ngakumbi kuyo nayiphi na into iipateni zethayile kunye nabanini bezitayile bajonge.
Kukho iithayile zeenkuni ze-porcelain ezinokusetyenziswa nangaphandle njengamachibi okubhukuda okanye iigadi kodwa qiniseka ukuba ujonga umenzi ngokufaneleka kwethayile ye-porcelain.
Nangona abanye abavelisi benobungakanani babo obungalinganiyo, uninzi lweethayile zesikwere ziza ngobukhulu obulandelayo: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, kunye nee-intshi ezingama-24; uninzi lweethayile ezenzelwe ngokukodwa imigangatho zineesayizi ezinkulu ezi-6 ngeesentimitha nangaphezulu.
Ukuba uvavanya ukuba iithayile zeenkuni ze-porcelain lukhetho olusebenzayo kwikhaya lakho okanye kwishishini, ke kungcono ukuba uqonde ezi zibonelelo zilandelayo kunye nokusilela. Nantsi i-porcelain yeenkuni zokwenza iithayile kunye nobubi obuqala ngeenzuzo.
Yomelele kuneyona ndawo iphantsi yomgangatho . Iithayile zomgangatho eziphathwe kwaye zafakwa ngokuchanekileyo zinokuhlala kwi-avareji yeminyaka engama-50 nangaphezulu kwindawo yokuhlala. Iithayile ze-porcelain zepremiyamu zepremiyamu zinokuhlala kangangeminyaka engama-75 ukuya kweli-100 ngofakelo olufanelekileyo.
Ilungele abanini bezilwanyana zasekhaya . Kuba iithayile ze-porcelain ezibonakala ngathi zingumthi ngokusisiseko amatye enziwe ngabantu awunakukhathazeka malunga nokuchaka kunye nokunye ukungcola okunokubangela ukwenzakala kwizilwanyana zasekhaya.
Umgangatho womoya ongaphakathi . Ukuphelisa i-gassing kunyango oluqinileyo lomthi kunokubangela iingxaki zokuphefumla kubahlali. Ngeetera ze-porcelain ezenziwe ngomthi kunye nomxholo ophantsi we-VOC wokugungxula ngekhe uphinde ube neengxaki zomoya ongcolileyo.
Ukongeza, iithayile ze-porcelain azigcini isikhunta kwaye kulula ukuzicoca zithintela uthuli ekwakhiweni kwemigangatho yakho.
Uluhlu olubanzi lokhetho loyilo lomgangatho . Kukho ubukhulu obukhulu kunye noyilo onokukhetha kulo ukuze utshatise inkangeleko yakho oyifunayo kwaye uya kufumanisa ukuba iithayile ze-porcelain ziyafumaneka ngokulula ekuhlaleni.
Ngaphandle kombala kunye nobukhulu, unokukhetha iidigri ezahlukeneyo zethayile yetreyini yomthi. I-Matte, i-glossy, i-gloss-gloss, okanye i-gloss ephezulu ziintlobo eziqhelekileyo zokugqitywa komhlaba kwiileyili zamatye.
Umtsalane omhle kunye nobunewunewu . Imigangatho yeplanga inesibheno esingenakuthelekiswa nanto esinika indawo efudumeleyo kunye nentofontofo emajukujukwini, kwaye iithayile zeenkuni zeporcelain zithatha ukubonakala kwendalo.
Ngapha koko, uyilo olusandula ukuphuculwa lunokukunika umahluko ngakumbi kunye neetayile ze-porcelain ezijongeka ngokwendalo ongenakuze ukwazi ukwahlula phakathi kweenkuni ezilukhuni kunye neethayile zeplanga leplasta. Funda ngakumbi malunga iintlobo zomthi okhuni Apha.
Ithayile enokusetyenziswa ngaphandle . Iiceramic kunye nezinye iithayile zamatye zinokuqhekeka ngexesha lobushushu obugqithisileyo kunye nezinye iimeko ezigabadeleyo ngelixa umphezulu wePorcelain ungenakuchukunyiswa kunye ne-porosity encinci ethintela amanzi ukuba angangeni.
Ngesi sizathu, uyakufumana abanye abavelisi ababonelela ngeethayile zodonga lwe-porcelain ukuze zisetyenziswe ngaphandle ezinokufakwa kwiipatios nakwiindawo zokubhukuda. Qiniseka ukuba ujonga iinkcukacha zomenzi wakho ngaphambi kokuthatha isigqibo sokufaka iithayile zeplanga ze-porcelain ngaphandle.
Ulondolozo oluphantsi . Ukugcinwa rhoqo kwethayile ye-porcelain kulula ngokutyibilika kunye nokutshayela ukungcola. Kwaye ngokungafaniyo nemigangatho eqinileyo yomthi, awudingi ukucokiswa okunendleko kweethayile zakho zamatye ukuze zigcine i-sheen yazo.
Unokucoca iithayile ngaphandle kwayo nayiphi na imiba kwaye ayiqwalaseli isepha kunye nezinto zokucoca. Kodwa qiniseka ukuba ubuze ukucoca kunye nokugcina imiyalelo kumthengisi wakho kuba ayizizo zonke iimveliso zethayile ye-porcelain ezilinganayo.
Ukumelana namabala . Umgangatho ophezulu kunye nokutsha okuphuculweyo kwethayile yeplasta yomthi iphantse yamelana namabala. Oku kuyenza ilunge njengesixhobo sophahla kumakhitshi nakwigumbi lokuhlambela. Bona Okuninzi iintlobo zeethayile zekhitshi Apha.
Ixabiso elifanelekileyo kumakhaya nakwiindawo zorhwebo . Iithayile ze-porcelain zinokubiza kakhulu ukufakela kuneminye imigangatho yomgangatho kodwa kutyalo-mali olufanelekileyo ngakumbi kwiindawo ezinkulu zorhwebo. Kulula kakhulu ukuyigcina nokucoceka kwaye inokumelana neendawo ezigcwele abantu ngenxa yokuqina kwayo okuphezulu. Kwaye kunciphisa isidingo sokuphinda ubuye kwimigangatho.
Ukufezekisa uyilo oluhambelanayo . Enye yeengxaki ngomgangatho wemithi yendalo kukuba awukwazi ukuzifaka kumagumbi okuhlambela nakwezinye iindawo ezinomswakama ophezulu. Ngeetera zeplanga ezenziwe ngeplanga ungazifaka phantse naphi na xa usenza izinto zokudibanisa kunye nokumanyeneyo. Bona Okuninzi Imibono yethayile yangasese yangasese Apha.
Kunzima ukuyifaka endaweni yethayile xa sele itsaliwe . Nangona zomelele kakhulu, iimeko ezigabadeleyo ziya kubangela ukuba iithayile zakho zeenkuni zenziwe nge-porcelain.
Ukuba oku kuyenzeka, kunokuba nzima ukulungisa ithayile eyonakalisiweyo ngakumbi ukuba ubunazo iithayile ze-porcelain iminyaka emininzi njengoko uyilo okanye isitayile esinye sisenokungabikho. Ngokungafaniyo nemarble okanye igranite apho unokujonga khona wonyusa umonakalo.
Ngaba ungabiza imali kwaye kunzima ukuyifaka. Enye yeethayile ze-porcelain iinkuni eziluncedo kunye nengcango kunokuba ngexabiso eliphantsi ukuyithenga kodwa abasebenzi banomdla wokufaka kwaye ke kubiza kakhulu. Ngokungafaniyo neethayile zeceramic, iithayile ze-porcelain, ngokubanzi, zinzima kwaye zifuna udaka olukhethekileyo kunye nezixhobo ngexesha lofakelo.
Lindela ukuba unofakelo olunomsebenzi kunye nokuchitha ixesha. Ngaphezulu kwezi, uya kuba neendleko zabasebenzi zingaphezulu kunokufaka iithayile zeceramic.
Umgangatho obandayo . Eli lixhala labanini bamakhaya njengoko iithayile ziya kuziva zibanda kwiinyawo ezingenanto kwaye ziya kushushu ngokukhawuleza xa ziphantsi kwelanga.
Cinga ngokufaka ukufudumeza umgangatho, ayigcini nje ukugcina imigangatho yakho ishushu kamnandi kwaye ikongela nakwiindleko zamandla ethubeni ingakumbi ebusika.
Umphezulu omtyibilizi . Icala elisezantsi lokuba nomphezulu ogudileyo kukuba unokutyibilika ngakumbi xa umanzi. Ukuthintela oku, cinga ukongeza i-tile glazing okanye i-anti-slip inyathela kwindawo yokurhweba.
Unokubeka kwakhona iiragi zommandla kwiithayile zakho ze-porcelain ezinje ngeendawo ezinamanqanaba aguqukileyo okanye imigangatho yomgangatho olungele ukuchitheka.
I-tile grout inokungcoliswa . Ngelixa iithayile zeenkuni ze-porcelain zinganyangeki, i-grout yakho phakathi kweethayile ayikhuseli ekucoceni nasekucoceni. Eyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa izongezo ezichasene nebala kwi-grout yakho ukuthintela amabala angafunekiyo.
Iindleko eziphezulu zokuqala zomgangatho . Lindela ukuhlawula iipesenti ezingama-60 ukuya kuma-70 ngaphezulu kweendleko zezinto ezibonakalayo kuneetiles zeceramic xa ufaka iithayile zomthi we-porcelain kwaye ngaphezulu kwayo lixabiso eliphezulu labasebenzi lofakelo.
I-Porcelain ye-tile yokhuni olunzima nolunxibe nzima ngenxa yento yokwenza izinto kunye nenkqubo yokuvelisa ngenxa yoxinaniso lwayo oluphezulu kunye nokuncipha kweporosity.
Iithayile zomthi weporcelain azilungelanga ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala kuphela kodwa zikwasetyenziswa kwizicelo zorhwebo ezinendawo eziphakathi ukuya kweziphezulu.
Njengokuba ingezizo zonke iithayile zeenkuni ezenziwe ngokulingana, fumana umgca owaziwayo weethayile ze-porcelain ezine-PEI (Porcelain Enamel Institute). Uvavanyo olucetyiswe yi-ASTM (Umbutho waseMelika woVavanyo kunye nezixhobo)
Amanqanaba ngamanqanaba ukusuka kwiQela 0 ukuya kwiQela lesi-5 okanye i-PEI 5 aqala kwiQela le-0 elinezinga eliphantsi kwaye iQela lesi-5 lelona linokuzinza okuphezulu.
Qaphela nangona ukuba ukulinganisa okulandelayo kulinganisa kuphela iithayile 'amandla kunye nokusetyenziswa kwaye awuchazi umgangatho uphela wethayile ye-porcelain.
Xa kuthelekiswa nemabhile, i-ceramic, kunye ne-granite, ukhuni lwe-porcelain luneyona ndawo inzima kakhulu ngenxa yoxinzelelo lwayo oluphezulu kunye nenkqubo yokucinezela ubushushu. Oku kwenza umphezulu wetayile ye-porcelain ungaphezulu nangaphezulu kwegranite yenye yezona zinto zinzima.
Uvavanyo lobulukhuni lukaMohs lukaMoh lubonisa ukuba ithayile ine-6 ​​ukuya kwi-6.5, ngelixa iithayile zeplanga ze-porcelain zifumene umndilili we-7 ukuya kwi-8.
Olunye uncedo lweethayile ze-porcelain kukuba unombala ofanayo kuyo yonke iithayile zakho nokuba xa ikrwitshiwe ayizukuhambelana ngokubonakalayo.
Iithayile ze-Porcelain ezenziwe ngomthi zizinto ezinzima kakhulu kumgangatho waphantsi kwaye akunakulindeleka ukuba ziqhekeze ngokulula naphantsi kweendawo ezixinene ngabantu. Kodwa ukuba iintanda zibonise ngesiquphe kumgangatho wakho kunokuba yimeko yeminye imiba esisiseko.
Isizathu esiqhelekileyo sokuqhekeka kwethayile kukungasebenzi kakuhle kunye neendlela ezingekho mgangathweni. Ukuqhekeka kwethayile ye-porcelain nako kunokubangelwa lutshintsho olugqithisileyo lobushushu kunye nemiyalezo ebuthathaka okanye engaqinisekanga.
Ukulayisha ubunzima obuninzi kwiithayile zakho zeenkuni ze-porcelain kunokubangela nokuqhekeka kweenwele kwiithayile zakho ze-porcelain.
Iithayile zomthi zeCeramic kunye ne-porcelain zinokubonakala ngokufana ekuqaleni kwaye zombini zibonelela ngomhlaba owomeleleyo okoko i-tile igcwele.
Uncedo lwe-porcelain ngaphezulu kweethayile zeceramic kukuba iyajiya, ayimeli ngamanzi, kwaye ayibonisi ukungafezeki ngokulula njengoko umbala ongaphezulu ufana naphantsi kwetayile. Uncedo nangona kunjalo iithayile zeceramic kukuba ziyafikeleleka ngakumbi kune porcelain.
Zombini i-porcelain kunye ne-ceramic tiles zifikeleleka ngokuthelekiswa nezinto ezininzi zokuthayipha kodwa ekubeni ixabiso lixhomekeke kakhulu kwi-porcelain yezinto ezibonakalayo zibiza kakhulu kune-ceramic. Uza kuchitha malunga neepesenti ezingama-60 ukuya kuma-70 ngaphantsi xa ukhetha iithayile zeceramic ngaphezu kweporcelain.
Ucinga ntoni ngezi zinto zilungileyo kunye nezibi? Ngaba ikhona into esiyiphosileyo, ukuba kunjalo sixelele kwizimvo. Ngenye inqaku elinxulumene noko ndwendwela eyethu iintlobo zeethayile zangasese igalari.
unganxiba ilokhwe emnyama emtshatweni
amagama okugqibela aqhelekileyo kuthi
ukuphosa irayisi emtshatweni
iingoma zokungena emtshatweni 2015
ukutshata umfazi onomntwana